Kiiboodhka buuxa ee shaashadda cusub ee taxanaha Apple Watch 7 | Wararka IPhone
Mid ka mid ah qaybaha togan ee haysashada shaashadda weyn ee Apple Watch ayaa ah inay noo oggolaanayso inaan ku raaxaysanno keyboard -ka buuxa ee saacadda. Ikhtiyaarkani suurtagal ma noqon doono haddii aan koritaanka shaashadda ee Apple gaadhin taasina waa moodooyinka hadda jira ma haysanno kiiboodh buuxa oo aan wax ku qorno laakiin waxaa lagu hirgeliyaa moodooyinkan cusub.
Shaashadda weyn ayaa sidoo kale taageerta 50% qoraal dheeraad ah sida ku cad soo bandhigidda, wax adeegsadayaasha hela farriimo qoraal ama emaylo badan shaki kuma jiro inay qaddarin doonaan. Marka la soo koobo, waxa muhiimka ah ee halkan ku jira ayaa ah in cabbirka guud ee kiiska saacadda iyo dejintiisu aysan waxba kordhin, waxa kora waa shaashadda.
Kiiboodhka ayaa kuu oggolaanaya inaad adeegsato shaqada Quickpath
Waxay sidoo kale ku daraan ikhtiyaarka uu Apple ugu yeeray Quickpath, taas oo aan ahayn wax kale oo aan ahayn ikhtiyaarka lagu qoro adigoo ku riixaya keyboard -ka laftiisa. Faahfaahin kale oo xiiso leh ayaa ah in shaqadan cusub ee gaarka ah ee Taxanaha 7 ay u adeegsanayso sirdoon macmal ah si loo barto erayada sidaas darteedna mar kasta oo aad isticmaasho way kuu sahlanaan doontaa inaad wax qorto adigoo is -siibanaya, sida iPhone -ka maanta.
Shaashadan cusub oo weyn oo ka bilaabmaysa 41mm ilaa 45mm oo ah moodelkii weynaa, wax kharash ah nagama gelinayso in aan xarfaha xarfaha ku sawirno xitaa haddii aan leenahay faro waaweyn. Badhamada is -dhexgalka iyo is -dhexgalka guud ahaan ayaa sidoo kale dib loo habeeyay si loogu isticmaalo saacaddan cusub oo hadda aan weli sugeyno in aan meel dhigno. Waxaa la sheegay in laga yaabo inay soo daahdo dayrtaan xitaa laakiin ma jirto wax Apple xaqiijisay sidaa darteed waxay noqon doontaa waqtigii la sii wadi lahaa sugitaanka arrintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Kiiboodh buuxa oo ku yaal shaashadda cusub ee Apple Watch Series 7
Horey ayay ugu suurtagashay barnaamij dibedda ah, way diideen oo hadda waxay ku dareen si gaar ah saacadda 7. Sida fiican ee aad u tufaax u baxdo.